Ukuphupha i-kangaroo Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Iikhangaru ziziimarsupials kwaye indawo yazo yokuhlala igxile kwilizwekazi lase-Australia, elibandakanya iziqithi zase-Australia. Ezona mpawu zidumileyo zekhangaru yimilenze yayo ende, eyomeleleyo yangasemva, esetyenziselwa ukutsiba, kunye nomsila wayo omde wokuxhasa okanye ukulungelelana. Njengophawu oluthile lwabasetyhini, kukwakho nengxowa eqhelekileyo esiswini apho abancinci bahanjiswa kwaye bakhuliswe khona.
Ukhe waphupha nge-kangaroo kwaye ufuna ukufunda indlela yokutolika ngcono eli phupha? Emva koko jonga la maphupha aqhelekileyo alandelayo malunga nesimboli, kunye nokutolikwa kwephupha ngokwasengqondweni nangokomoya kwalo mfanekiso uphuphayo:
1 Isimboli yamaphupha «Kangaroo» - amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
1.1 Usana lwekhangaru - intle kakhulu ephupheni!
1.2 Ukutsiba: ukuphupha i-kangaroo efileyo
1.3 Ukuqwalaselwa, uhlaselo lwekhangaru! Lithetha ukuthini iphupha?
1.4 I-kangaroo enkulu kuhlalutyo lwamaphupha.
2 Uphawu lwephupha «Kangaroo» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «Kangaroo» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «Kangaroo» - ukutolika kokomoya
Isimboli yamaphupha «Kangaroo» - amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
Usana lwekhangaru - intle kakhulu ephupheni!
Ukuphupha i-kangaroo yosana kwenza ukuba umntu ochaphazelekayo aqonde ukuba umntu okhuphisana naye el mundo okwenene uzama ukuthatha ithuba lokuba umsulwa. Kule meko, kufuneka basebenzise amandla abo kunye nokuguquguquka ukuzikhusela kule ndlela.
Ukutsiba: ukuphupha i-kangaroo efileyo
Ikhangaru efileyo ngokuqinisekileyo ayisiyonto intle ephupheni, kodwa kunokubakho into elungileyo emva kwayo. Ukuba ikhangaru ifile ephupheni, oku kungumfuziselo wokuphela kwenqanaba lobomi kwaye kwangaxeshanye ukuqala kwesigaba esitsha, apho umntu anokusebenzisa amandla kakuhle.
Ukuqwalaselwa, uhlaselo lwekhangaru! Lithetha ukuthini iphupha?
Uhlaselo lwekhangaru, kwelinye icala, lunokumela isoyikiso, kodwa kulungiselelwe umphuphi. Kwelinye icala, emva kwephupha elinjalo, kufuneka ulumkele ukunyoka. Umfanekiso wephupha "uleqwa yikhangaru" uphawula ukubaleka ekuphunyezweni kweprojekthi. Yiba nesibindi sokumilisela!
I-kangaroo enkulu kuhlalutyo lwamaphupha.
Ukuba i-kangaroo enkulu ivela kwilizwe lamaphupha, oku kuthathwa njengokuqiniswa okukhethekileyo komqondiso wephupha. Ke ngoko, kunokwenzeka ukuba umntu olalayo unezinga eliphezulu lokuzimela kunye nokuziqhelanisa okanye ukuba utshintsho olubalulekileyo kunye nolwamkelekileyo ebomini lusondele.
Uphawu lwephupha «Kangaroo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kutolika "ikwangaroo" isimboli yamaphupha rhoqo njengophawu lokuba ngumama okanye nako okwakhiwa. Ukuphupha kwihlabathi elivukayo kuya kufuna la mandla namandla ukuze ukwazi Utshintsho ezikwayanyaniswa nekhangaru njengomfuziselo wokulala.
Umntu ochaphazelekayo kufuneka abhetyebhetye kwaye akulungele ukwenza, kuba utshintsho ebomini bakhe luhlala lusenzeka ngokuzenzekelayo. Ngokunamathela kule ndlela yokwenza, unokujamelana kakuhle notshintsho, kwaye unokujonga phambili kwinkqubela phambili yezemali kubomi bokuvuka.
Umbono wekhangaru uhlala ubhekisa kumbangi onobuqili ofuna ukonakalisa iphupha. Kodwa amaphupha aya kuba nakho ukucima oku ngexesha. Nabani na ohlaselwa yikhangaru ephupheni lakhe kufuneka anike ingqalelo igama lakhe ekuvukeni kobomi. Oku kusesichengeni kwaye kungakho umngcipheko wokudlula ukunyelisa yonakele.
Ukubulala ikhangaru njengomqondiso wephupha kubonisa impumelelo kwihlabathi eliphaphamayo. Ukuba ubona uboya bekhangaru ephupheni lakho, ungonwaba. Kuba ukwindlela elungileyo eya empumelelweni.
Ngamanye amaxesha, ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, uphawu lwe "kangaroo" lwamaphupha lusenokukuqhubela ekubeni uqhubeke nokwenza iiprojekthi kwaye ke ufezekise iinjongo kunye nethemba lakho. Iipropathi ezibalulekileyo zibandakanyiwe speed y Ukuzenzekelayooko kuphupha kunokwenzeka kwanele.
Uphawu lwephupha «Kangaroo» - ukutolikwa kwengqondo
Uphawu lwephupha "i-kangaroo" kukuthi, ngokwenkcazo yengqondo yephupha, ibonakaliso lweemvakalelo zoomama nabongikazi bephupha. Kuya kufuneka uqaphele ngephupha lakho ukuba unxulumene ngokusondeleyo nabanye abantu kwihlabathi elivukayo ngeli xesha. umkhuseli iyaziphatha. Nangona kunjalo, ukuphupha akufuneki kukuyibaxe le ndlela yokuziphatha, kungenjalo kuthintela aba bantu kakhulu.
Ngamanye amaxesha i-kangaroo inokukwenza ukuba ulale ngokuziphatha ephupheni, ngakumbi xa i-kangaroo yokulala iza kuhlasela.
Ikhangaru exhuma njengomqondiso wephupha ibhekisa kwezengqondo enkulu Ukuguquguquka yokuphupha. Ukulala kunokuba nexesha elinzima kwihlabathi lokuvuka ukugxila kwinto ethile okanye kukuhamba rhoqo. Kuya kufuneka wehlise umoya kwaye ujonge ingqalelo yakho kwinto ebalulekileyo ebomini bokuvuka.
Kwangelo xesha, kunye noku kutolikwa komqondiso wephupha, a isicelo Ukhatshwa. Kuba ukuphupha kuyenzeka nje kwaye kunqabile kancinci ebomini bokuvuka, kuya kufuneka uyitshintshe le ndlela yokuziphatha kwaye uzise izinto ezahlukeneyo kubomi bakho.
Uphawu lwephupha «Kangaroo» - ukutolika kokomoya
Inqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha libona kwisimboli yephupha "kangaroo" uphawu olukhulu nolungagungqiyo. Iluminación kwizinto zokomoya. Ngale nto, ukuphupha kunokufikelela kwinqanaba elibalulekileyo lokukhula ngokomoya.